Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokana nataon'i William Blake Alex Gray - Fikarohana momba ny vatana teraka
Affirmed By: Ny Fanahy dia Ahtun Re ao amin'ny sehatry ny Fikarohana momba ny Reenkarnation Ryerson-Semkiw
Sarotra ny mampita tsara ireo fifandraisana mahaliana sy fifandraisana izay mihazakazaka sy mientana amin'ny fiainana sy ny asan'ny William Blake ary Alex Gray. Izany Alex Gray dia "mpihazona tsipika" maoderina ao amin'ilay fomban-drazana ny zava-kanton'ny fahitana masina notarihin'i William Blake dia zava-misy hita sy hita foana. Ankoatra ny fitsidihana an-tsary ny sanganasan'i Blake sy Gray, famakiana an'i Grey Misionan'ny Art, ny tranonkalany, na ny maro amin'ireo dinidinika nataony dia manolotra varavarankely ho an'ireo filôzôfia sy ara-panahy izay mampahafantatra ny vokatra azony.
Amin'ny foto-kevitr'ireo vatana vaovao hafa, i Grey tenany mihitsy dia nahatsapa fifandraisana tamin'ny mpanakanto hafa mpijery, 20th taonjato faha-XNUMX Belgian Symbolist Jean Delville. Raha niahiahy ny rohy teo amin'i Gray sy Blake nandritra ny taona maro aho dia mbola tsy tena nandinika azy io, ary nandritra ny fitsangatsanganana an-tsokosoko tamin'ny alàlan'ny Internet no nahitako lahatsoratra iray izay nankalazain'i Alex Gray ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i William Blake tao aminy Chapel an'ny fitaratra masina, ary sendra ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'izy ireo iray andro monja, nahatonga azy io ho karazana fankalazana iraisana. Mampiseho tratran'i Blake sy manome lanja ny maha-zava-dehibe an'i Blake amin'ny asany, dia tsapako avy hatrany fa tao Gray sy Blake, nijery emanations roa mitovy fanahy aho.
Fihetseham-batana ara-batana amin'ny fanambadiana: Gray sy Blake dia mitovitovy amin'ny fitovian'ny tarehimarika hita maso, indrindra fa amin'ny maso sy ny orona.
Ny fiainana taloha talenta: Na dia nanao ny asa ho lasa mpanakanto amin'ity fiainana ity aza izy, ny fahaiza-manaony sy ny maha-izy azy izay nahatonga azy haingana dia haingana ho toy ny iray amin'ireo mpanakanto mpanintona malaza manerantany dia maneho ny fomba amam-panao lalina sy ny traikefa azo avy amin'ny fiainam-baovao hafa natokana ho an'ny tetikasan-kanto. Raha misy Alex Gray ny 18th Taonjato taonany dia i William Blake ary ny mifamadika amin'izany.
Fomba fanao isan-taona : Raha tsy teraka izy ireo tamin'ny andro tena izy, dia toa kely kokoa noho ny mpiray tanindrazana aminy ny fahaterahany any aoriana.
Fiovana amin'ny maha-olom-pirenena: Teraka tany Angletera i Blake raha teraka avy any Etazonia i Alex Gray.